Androany amin'ny lalao mampiankin-doha amin'ny Android, andalana iray hafa | Androidsis
Lalao mampiankin-doha amin'ny Android: Androany, tsipika iray hafa
Manohy ny fizarana amin'ny Lalao mampiankin-doha amin'ny Android, fizarana sa tsia fizarana horonan-tsary, izay anoloranay anao ny lalao mampiankin-doha indrindra ary ireo izay ho azonao ampifandraisina indrindra amin'ny terminal Android anao. Ny lalao sasany, amin'ny ankapobeny, matetika no tsotra indrindra azontsika sintonina avy amin'ny Google Play Store.
Amin'ity tranga manokana ity dia tianay ny hanome anao lalao maimaim-poana izay mamaly ny anaran'ny Andalana iray hafa, ary araky ny fanamafisan'ny lalàna matetika, raha mampiankin-doha dia io no mora indrindra milalao sy mety ho an'ireo fotoana fialamboly kely ireo na esorina amin'ny asa mafy isan'andro.
Ny rafitry ny lalao Andalana iray hafa ho an'ny Android Io no tsotra indrindra satria ny fandrosoana fotsiny amin'ny sehatry ny antsasaky ny volantsika no ahazoana isa farany avo indrindra azo atao. Mba handrosoana miaraka amin'ny sambontsika, ilay faritra antsasa voalaza etsy ambony, dia mila miala amin'ny habaka hitantsika eny am-pandehanana fotsiny isika.
Mba hisorohana ireo sakana atolotra antsika dia tsy maintsy mandeha ihany isika misintona tadivavarana na manantona ny tenantsika amin'ireo sehatra hitantsikaAmin'izany fomba izany, ny famoahana amin'ny fotoana mety, manohiza ny làlantsika hahatratrarana teboka misimisy kokoa, izay no dikan'ilay lalao.
Lalao izay lalaovina amin'ny flip-flop toy ny amin'ny lalao hafa toa Flappy Bird ary ny anao mozika elektronika manodidina tsara manitrika antsika amin'ny psychedelia ny sary an'ny lalao.
Tsy misy fisalasalana asa tena tsara amin'ny resaka gameplay sy ny famolavolana ny lalao, izay no antony avy eto Androidsis ary izaho manokana dia manoro hevitra anao satria mieritreritra izahay fa hanome anao fiankinan-doha mahafinaritra sy mahasalama mandritra ny ora maro.
Andalana iray hafa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao mampiankin-doha amin'ny Android: Androany, tsipika iray hafa
Samsung dia manolotra ny Galaxy A3 sy Galaxy A5 any Espana
Ny vidin'ny Samsung Galaxy J1 dia voasivana, fifaninanana mivantana ho an'ny Moto G?